Sararri bakakkaa guyyaa wiyxata ganama bubbee guddaa, baradoo fi rooba muraasa eastern Nebraska
Published August 10, 2020 at 9:59 PM CDT
Sararri bakakkaa guyyaa wiyxata ganama bubbee guddaa, baradoo fi rooba muraasa eastern Nebraska fi Iowa keessati kan argame mukkeen jiysuuf fi human ibsaa addaan kutuun Sioux land dabalatee akka uumame himan.
Eastern Nebraska keessati bubbeen 70 mph gahuudhan rakkoo fiddee turte.
Hojattooni Tyson 4 sababa Corona virus erga du’an booda warri hojattoota caampaanicha seera duratti akka himataa jiran beekame. Hojattan Waterloo Facility keessa kan hojattuu April kara dhumaa irrati kan dueedha.
Akka seera himtoonni akka warra Tyson shakitettii dalaydoota isaani balaa dhukkuba irra akka geesu jirani fi nama akkaa yaadan fakkeessani akka miidhu jiraniifi akkasumas dhukkuba achitti argame kana ummata jalaa dhoysuudhan dalagaa ufii itti fufsiisani.
Tyson akka himetti namni du’uun baaye nuyaachise garuu seerri mormii kara dogongoratti deemu jira.
Lakkoofsi jiraatota Iowa corona virus qabame kara 49,000 ganama kana olgudattee jira. State keessati se’aati 24 darbe kana keessati namni tokko du’uu gabaasan.
Woodbury County keessati namni waliigalatti qabame 3700 yoo tau, kan guyyaa har’a qabame nama tokko dabalatee.
Namni du’emmoo 52 kan gahe yoo ta’u, kunis namatookko guyyaa gidirsaanbata du’e dabalatee, namni kunis nama dhiira umriin isaa 61-80 jidduuti argamuudha.
Dakota County keessati nama haarawa 9 qabame dabalatee namni waliigalatti qabame 1,900 yoo ta’u, kan waliigalatti du’emmoo 42 dha.
Colleges Nebraska kan dhunfaa fi mootummaa karoora isaaani kan ji’a kana mana barumsaa qaaman barsiisu hedan ituma fufu jirani, garuu seerawan adda addaa haarawa fudhachuu qabani akka dhukkubni kun hin babalanne dhooguf.
Bakkabuutoni kan college mootuma sadihii kan Nebraska fi college dhunnfa 13 akka jedhaniti barattooni kutaa keessati walirraa faffagaatani taa’u, seerra gareeti argamu gan nixxiqaata fi haguugi fuula dirqama campus state guutu keessati godhachuun. College kunis adada ummani seenun oo’a namaa laala seensisuuf karoora godhu jiru.
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotanewsTysonCOVID-19Oromohigh windStorm
Dameen mana fayyaa Iowa se’ati 24 darbe kana keessa sababa Covid-19 namni 6 du’uu gabaase, namni haarawa qabame ammo 600 dha. Woodbury County keessati…